Uhambo lwe-Agile lokuThengisa | Martech Zone
Uhambo lwe-Agile yokuThengisa
NgeCawa, ngoMatshi 19, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwiminyaka elishumi yokunceda iinkampani ukuba zikhulise amashishini abo kwi-intanethi, siye saqinisa iinkqubo eziqinisekisa impumelelo. Rhoqo kunoko, sifumanisa ukuba iinkampani ziyasokola kwintengiso yazo yedijithali kuba zizama ukutsiba ngokuthe ngqo ekusebenzeni kunokuba zithathe amanyathelo afanelekileyo.
Inguqu kweNtengiso yeDijithali
Utshintsho kwintengiso luyafana notshintsho lwedijithali. Kwisifundo seDatha esivela kwi-PointSource -Ukufezekisa inguqu kwidijithali- idatha eqokelelweyo evela kubenzi bezigqibo abangama-300 kwiNtengiso, kwi-IT, nakwiiNkqubo zokuSebenza kwimizabalazo amashishini anayo ekuphuculeni nomsebenzisi wokugqibela engqondweni. Bafumanise ukuba iinkampani:
Ukungabikho ngokucacileyo kuchazwe iinjongo kunye nolwalathiso - ngama-44% kuphela amashishini athi bazithembe kakhulu kwimibutho yabo yokufezekisa umbono wabo wokukhula kwaye iipesenti ezi-4 abazithembi kwaphela.
Umzabalazo wokudibanisa amava edijithali enqamlezileyo- Kuphela yi-51% yamashishini athi umbutho wabo ujongana neemfuno zomsebenzisi ezithile kuwo onke amaqonga
Yiba nembono yelifa elidala imiqobo kutshintsho lwedijithali- I-76% yamashishini athi isebe labo liyakhuphisana namanye amasebe kumbutho wabo ngezixhobo kunye / okanye kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ukusebenza kwiinkqubo eziphelelwe lixesha ezithintela ukubanakho ukuphucula amava edijithali- I-84% ithi umbutho wabo uneenkqubo zelifa ezingafaniyo ezichaphazela isantya sokuphuhliswa kwamava amatsha edigital
Ezi zizoyikiso kumbutho wakho njengoko unethemba lokutshintsha ukuthengisa kwakho kwidijithali. Sinomthengisi omkhulu kwingingqi owayefuna uncedo ngentengiso yabo yedijithali. Sibone ithuba elimangalisayo lokuba baqalise ngenkqubo entsha ye-ecommerce edityaniswe kwinqanaba labo lokuthengisa. Nangona kunjalo, ubunkokheli babukhaba iindleko ngenxa yokwakha uluhlu lwempahla kunye nenqaku lenkqubo yentengiso eyayibaxabisa amashumi ezigidi zeedola kule minyaka idlulileyo. Bathe naluphi na utyalomali kwindawo entsha yentengiso, uluhlu lweempahla kunye nenkqubo yokufezekisa ibingaphandle kwengxoxo.
Isiphumo kukuba bekungekhe kubekho ukungqinelanisa okanye ukudibanisa phakathi kwentengiso ye-Intanethi kunye ne-intanethi. Silishiyile eli themba emva kweentlanganiso ezininzi ezithembisayo- bekungekho ndlela nje yokuphumeza iziphumo zokukhula abanqwenela ukunikwa ukusikelwa umda kweenkqubo zabo. Andithandabuzi ncam ukuba le ibiyinto enkulu kwimizabalazo yabo - kwaye ngoku bagcwalisile njengongenamali emva kokubukela ukwehla kweshishini kule minyaka idlulileyo.
Ukuba ishishini lakho linethemba lokuziqhelanisa kwaye woyise le mingeni, kuya kufuneka usebenzise i ukuthengisa okwakudala inkqubo. Ayizondaba ezi, besisabelana ngazo iindlela zokuthengisa ezi-agile iminyaka embalwa ngoku. Kodwa njengoko unyaka nonyaka udlula, ifuthe lenkqubo yentengiso engaguqukiyo iyaqhubeka nokuphazamisa amashishini ngakumbi nangakumbi. Akuzukuthatha xesha lide ngaphambi kokuba ishishini lakho lingabinamsebenzi.
Izalathi-nkqubela phambili zomsebenzi bandise ishishini ledijithali, kubandakanya ulwazi, ukubandakanyeka, igunya, uguqulo, ukugcinwa, i-upsell kunye namava. Kwi-infographic yethu yamva nje, siludwelisile uhambo esiza nalo kubaxumi bethu ukuqinisekisa impumelelo yabo. Amanqanaba ohambo lwethu lwe-Agile yokuThengisa aquka:
Ukufumanisa - Ngaphambi kokuba naluphi na uhambo luqale, kuya kufuneka uqonde ukuba uphi, ujikeleze phi, kwaye uyaphi. Wonke umsebenzi wentengiso, umcebisi oqeshiweyo, okanye iarhente kufuneka asebenze kwisigaba sokufumanisa. Ngaphandle kwayo, awuyiqondi indlela yokuhambisa izinto zakho zokuthengisa, indlela yokuzibeka kukhuphiswano, okanye zeziphi izixhobo onazo.
Strategy -Ngoku unezixhobo zokuphuhlisa isicwangciso esisisiseko esisetyenzisiweyo ukufezekisa iinjongo zakho zentengiso. Isicwangciso sakho kufuneka sibandakanye isishwankathelo seenjongo zakho, amajelo, imithombo yeendaba, amaphulo, kunye nendlela oza kuyilinganisa ngayo impumelelo yakho. Uya kufuna isitatimende sonyaka semishini, ukugxila kwekota, kunye nokuhanjiswa kwenyanga okanye ngeveki. Olu luxwebhu lwe-agile olunokutshintsha ngokuhamba kwexesha, kodwa lunokuthengwa kombutho wakho.
Ukuphunyezwa -Ngokuqonda okucacileyo kwenkampani yakho, ukubekwa kwindawo yentengiso, kunye nezixhobo zakho, ukulungele ukwakha isiseko sesicwangciso sakho sentengiso yedijithali. Ubukho bakho bedijithali kufuneka ubenazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokwenza kunye nokulinganisa iindlela zakho zokuthengisa ezizayo.
enze -Ngoku yonke into isendaweni, lixesha lokwenza izicwangciso oziqulunqileyo kunye nokulinganisa ifuthe lazo zonke.
Ukulungiselelwa -Qaphela umsundululu opholileyo esiwubandakanyileyo kwi-infographic ethatha isicwangciso sethu sokukhula kwaye siyithumele ngqo ekufumaneni kwakhona! Akukho kugqitywa kwe Uhambo lwe-Agile yokuThengisa. Nje ukuba wenze isicwangciso sakho sentengiso, kuya kufuneka uvavanye, ulinganise, uphucule, kwaye ulungelelanise ngaphezu kwexesha lokuqhubeka nokunyusa ifuthe kwishishini lakho.
Gcina ukhumbula ukuba olu luhambo olupheleleyo, hayi isikhokelo seqhinga lokuphumeza nokwenza ukuthengisa okwakudala amacebo. Esinye isixhobo esineenkcukacha ezilungileyo kukuGuqulwa kweXL Uyenza njani iScrum yokuThengisa nge-Agile.
Sifuna ukubonisa ubudlelwane phakathi kwezigaba eziphambili zohambo lwakho kunye nezinto ekufuneka zihlolwe njengoko usiya kwindalo yentengiso yedijithali. Ndiyathemba ukuba uyayonwabela le infographic njengoko besikonwabele ukusebenza kuyo kwinyanga ephelileyo! Sisiseko salo lonke ukubandakanyeka kwabaxumi bethu.
Ndiphuhlise iphepha lokuSebenza lokuThengisa ukukunceda ucwangcise iinzame zakho zokuthengisa kunye nokuqinisekisa ukungqinelana neenjongo zakho zeshishini.
Khuphela iphepha lokuSebenza lokuThengisa
Qiniseka ukuba ucofa uguqulelo olupheleleyo ukuba unengxaki ekufundeni!
tags: ukuthengisa okwakudalauhambo lokuthengisa ngokukhawulezaimodeli yentengiso ye-agileInkqubo yentengiso e-agileIgunyaUlwaziukuguqulwautshintsho lwe digitalUkufumanisaNxaxhebakuqhutywaamavaukuqaliswauhambointengiso yemethologyimodeli yentengisoimodeliUkulungiswainkquboukugcinwaqhingainguquphezulu
Ungayirekhoda njani iNqanaba loMgangatho weAudio ngeWebhu
Ndithathe unyaka kwiNkomfa, nantsi into eyenzekileyo